Beddelaan Synthetix Collateral Token In US dollar
Updated 19/01/2020 08:07
Beddelka Synthetix Collateral Token In US dollar. Synthetix Network Token qiimaha US dollar maanta ee suuqyada isweydaarsiga lacagta digital.
10 Synthetix Network Token = 9.62 US dollar
Qiimaha sarrifka lacagta digital wuxuu leeyahay qiimo celcelis ahaan maalintii. Qiimaha sarrifka laga bilaabo Synthetix Network Token ilaa US dollar) laga soo qaatay keydka macluumaadka lagu kalsoon yahay. Tani waa tixraac ku saabsan heerka sarrifka lacagaha 'lacagta digital'. 1 Synthetix Network Token wuxuu dhacayaa 0.027524 US dollar. Qiimaha Synthetix Network Token maanta qarashkiisu waa 0.96 US dollar Heerka Synthetix Network Token sicirka ayaa hoos u dhacay marka loo eego US dollar ee -278 boqol meelood meel dhibic boqolkiiba.
Heerka Sarrifka Synthetix Network Token In US dollar
Seddex bilood ka hor, Synthetix Network Token waxaa lagu iibin karaa 0 US dollar. Lix bilood ka hor, Synthetix Network Token waxaa lagu badali karaa 0 US dollar. Saddex sano ka hor, Synthetix Network Token waa la isweydaarsadaa 0 US dollar. Synthetix Network Token sicirka sarrifka US dollar waa ku habboon in lagu arko shaxda. Isbeddelka heerka sarrifka lacagaha Synthetix Network Token to US dollar ee usbuuca waa 1852.92%. 0% bishii - isbeddelka heerka sarrifka Synthetix Network Token.
Synthetix Network Token (SNX) In US dollar (USD) qiimaha sicirka
Synthetix Collateral Token ugu fiican US dollar
Bixinta ugu fiican Synthetix Collateral Token qiimaha sarrifka maanta ee dhammaan suuqyada lacagta digital. Suuqa ugu fiican si aad u iibsato ama u iibiso Synthetix Collateral Token maanta.
Isbedelka Synthetix Collateral Token ugu fiican dhammaan suuqyada adduunka
Beddelaadda Lacagta digital Synthetix Network Token US dollar
Synthetix Network Token (SNX) In US dollar (USD)
10 Synthetix Network Token 9.62 US dollar
50 Synthetix Network Token 48.12 US dollar
100 Synthetix Network Token 96.25 US dollar
250 Synthetix Network Token 240.61 US dollar
500 Synthetix Network Token 481.23 US dollar
1 000 Synthetix Network Token 962.46 US dollar
2 500 Synthetix Network Token 2 406.14 US dollar
5 000 Synthetix Network Token 4 812.28 US dollar
Maanta, 10 Synthetix Network Token waxaa laga iibsan karaa 9.62 US dollar. Maanta, 25 Synthetix Network Token waxaa lagu badali karaa 24.06 US dollar. Waad ku iibin kartaa 50 Synthetix Network Token ee loogu talagalay 48.12 US dollar . Hadaad leedahay 96.25 US dollar, ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu iibin karaa 100 Synthetix Network Token. Hadaad leedahay 240.61 US dollar, ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu iibin karaa 250 Synthetix Network Token. Si loogu badalo 500 Synthetix Network Token, 481.23 US dollar are are loo baahan yahay.
Synthetix Network Token (SNX) In US dollar (USD) Heerka Sarrifka
Beddelaan Synthetix Collateral Token In US dollar maanta 19 January 2020
6 December 2018, 1 Synthetix Network Token = 0.049283 US dollar.
Synthetix Network Token (SNX) In US dollar (USD) shaxda qiimaha taariikhda
Synthetix Network Token iyo US dollar
Synthetix Network Token codka lacagta digital SNX. Synthetix Network Token ganacsiga bilawga suuqa sarrifka isweydaarsiga 05/12/2018.